Mayelana ebhaliwe Freemasonry isibalo esingapheliyo - ivolumu ucwaningo kanye nobuciko imisebenzi (elikhulu Roman Pisemskogo "Masons").
Ukuhlanganisa namaFreemason (ukuthi umsindo ngakho kwaba ukuhumusha izwi ne- igama elithi "Freemason"), hhayi inkolo, ukuncintisana nezinkampani yimiphi legatsha yayo kunombolo abalandeli nokuduma.
Lena eziyinkimbinkimbi, umnandi kakhulu, futhi okubaluleke - isakhiwo imfihlo. Isimo olusemthethweni ke wathola izikhathi eziningana, kodwa hhayi isikhathi eside. Akekho owaziyo ngempela imbangela uqinisekile kweqiniso kanye nesikhathi nesenzakalo yayo, akekho lungacacisa kweqiniso imigomo yayo futhi inani lamalungu phakathi kwababusi uma engekho ubuhlobo elangenza oqondile. Ngakho-ke, ukuthi inhlangano Wayevame benezici yeminye imiphakathi eyimfihlo.
Nokho, phakathi namakhulu eminyaka amaningi khona ukuthuthukisa futhi ukukhomba izimpawu ezithile Freemasonry, ukwazi ukuthi, singasho okulandelayo: ngenani Masons ukwamukela, njengoba umthetho, abantu abafunde kakhulu, izimele futhi osungulwe, naphezu kweqiniso lokuthi esigabeni sokuqala sabaphathi wabelwe isikhundla "umfundi".
Sasidinga amasevisi ekhethekile noma iminikelo emikhulu ukufinyelela esigabeni sesibili - the osafunda, kanti eyesithathu - master. Kanye uphawu futhi uphawu Masons kukhona ngokuvamile imfihlo.
Amatshwayo okuvalelwe kungabhekisela umlando okuvela, izinto eziza kuqala kuwe futhi imigomo yenhlangano. Ngakho, "igobolondo kanye pearl" zimelela self-ngcono kanye self-ukuthuthukiswa komuntu (kusuka uhlamvu lwenhlabathi at emangalisayo onzima zabasebenzi pearl kumele zimiswe).
Noma yimuphi umuntu ofundile ujwayelene izinhlamvu futhi ukwazi ukuthi ekuqaleni base ezintathu sikwele, isando lwako. Kamuva 'abafowabo' lathathwa ezinkolweni izinhlamvu njengo- "abona yonke into ayakubona iso", izinsika ezimbili (Yaoken noBhowazi), 6 kanye inkanyezi 5 enamaphoyinti, umbuthano nabanye, cishe zonke zazo wathwala izimpawu kaSathane lasendulo, ukuthi ngokwengxenye uchaza khona imfihlo.
Okumangazayo njalo ezilingayo, ekujabulisayo umcabango, wenza okuthile icabange. Ngakho-ke, ilungu inhlangano Masonic kuchasiselwe inani Russian Tsars, uNapoleon, uStalin kanye Hitler.
Kodwa uma noma yiziphi izimpawu Freemasonry - inkemba (umthetho), ngesihlahla legatsha (ukungafi), ikhampasi nabanye (mayelana 14) - alebuliwe, bodokotela, ethumba eziningi imidwebo of genius, isibonakaliso Masons njalo ngeveli.
ukuthinta Special ambalwa, futhi phakathi okuqalwe zinikelwe indima ephawulekayo. Okunjalo izimpawu imfihlo Masons njengoba ukuxhawulana emhlanganweni (nail we isithupha esandleni sokunene icindezelwa ukuba ilunga 1st esandleni efanayo elinye ilungu Lodge), ungathatha bazana futhi ukugcizelela ukuthi bakuyiphi inhlangano eyimfihlo.
Enye othi izinhlamvu amazwi Yaoken noBhowazi - futhi uphawu Masons, okushiwo kwanikezelwa izintandokazi zakho kuphela.
A indima ekhethekile udlalwa by isenzo "isandla ezifihliwe", okuthiwa efanekisela postulate "umuntu wathi icala lakhe." Njengenkulumo izwe elikhulu nokuboniswe imidwebo ngesandla sakhe sokunene, efihlwe cuff zokugqoka. Mhlawumbe base Masons, noma mhlawumbe kwaba nje umkhuba. Enye isibonakaliso Masons - ebambe ilungelo efanayo (s Freemasonry uthola indawo ekhethekile) isandla ngakujantshi entanyeni, zifana kuya phansi. Wakhuluma indoda okuqondene esigabeni "umfundi".
Masons izimpawu nokubaluleka kwazo kunzima overestimate, ngenxa yokuthi, ngokusho kweminye imithombo, lokhu umphakathi has zezikhulu zayo namuhla mayelana 5 million. Abantu, izindawo zokulala ke kukhona kwamazwe asethuthukile. Ngemva ukulingana kwakhiwa, futhi kukhona izindawo zokulala zabesifazane - "Big Dipper", "Cameo" nabanye.
Amalungu inhlangano eyimfihlo lonke uhlelo zezibonakaliso imfihlo lwenzelwe ngosizo lapho liyakwazi inkhulumomphendvulwano. Nokho, lolo phawu ezishaqisayo we namaFreemason (mhlawumbe kuphela isibaluli kubo) ngokuthi "ukubonisa izimpondo zalo" (iminwe emithathu, yebo, isandla sakhe sokunene clenched e isandla kanye index ngomunwe futhi umunwe kancane aphonswe phambili), wasebenzisa ngamabomu noma cha, uvelile ngaphambi bonke abanye. Ukwahlulela ngokubukeka kuye, khona-ke Masons ngumnikazi ingxenye yesintu. Lesi sibonakaliso Masons - uphawu uSathane - eyehlisa ukunyakaza, ogama imibono (ukwakhiwa entsha, ukuphishekela ubuhle, imfundo) akukubi ngakho.
Ukusebenzela uZimu - Lingubani leli qhawe? ekhupha amadimoni
"Izospan AM": imiyalelo kanye Ukucaciswa